Biyaha ninka maxay u soo noqdaan Galmada xaaska kaddib. | Gaaloos.com
Home » galmada » Biyaha ninka maxay u soo noqdaan Galmada xaaska kaddib.
Biyaha ninka maxay u soo noqdaan Galmada xaaska kaddib.
Waxaad arkaysaa xaaskaaga marka aad u galmooto in biyaha aad ku shubtay isla markii soo daataan, dadka qaarkii waxay u malaynayaan in arintaas ay dhib ku tahay uur qaadsita, oo naagta haddii biyaha ka soo daataan galmada marka ay dhamaato oo bahalka laga soo bixiyo cambarkeeda, uur ayna qaadi karin.
Taas waxba kama jiraan uurka kuma xirna biyaha inay soo noqdaan iyo in kale, waxaa ku filan uurka biyaha meesha inay galaan, haddii naagta ay diyaar u tahay jir ahaan inay uur qaaddo Allena – subxaanau wa tacaalaa– uu idmo in ilmo caloosha galaan soo daadashadaas waxba reebi mayso.
Naago badan ayaa jira kastuumada biya lagaga shubay uur ku qaaday sidaas, laakin inta badan soo daadashada waxaa keena kala duwanaanshaha cambarka, haween waxaa jira cambarkooda marka bahalka la geliyo aad u waasac noqda oo si fiican u furma, iyo kuwa waxa jira cambarkooda nab isku ah.
Title: Biyaha ninka maxay u soo noqdaan Galmada xaaska kaddib.